မိန်းကလေးတို့အတွက် ဘဝဒဿနများ – Trend.com.mm
အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။ မိန်းမသားတို့အတွက် မှတ်သားဖွယ် ဘဝဒဿနတွေကို Trend ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
၁။ အချစ်ကို သင်ယုံကြည်လို့ရတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ ချိုချိုသာသာစကားတွေကို သင်နားထောင်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်နားက နားထောင်ရင် ကျန်တစ်ဖက်နားက ထွက်သွားပါစေ။ ပျားရည်လိုချိုတဲ့ အဆိပ်တွေကို ရင်ထဲ သိမ်းဆည်းမထားပါနဲ့။ တော်ထက်တဲ့ယောင်္ကျားတွေကို သင်တန်ဖိုးထားနိုင်တယ်။ တကယ်လို့ အိမ်ထောင်သည်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကပ်ထားသူဆိုရင် သင်တတ်နိုင်၊ လက်ခံနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ကြောင်း မမေ့ပါနဲ့။ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရင် ဘာအတွယ်အတာမှမချန်ဘဲ ဝေးဝေးခွာပါ။
၂။ ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ပန်းအလှကို တန်ဖိုးထားပါ။ ထိုနည်းတူ အတွင်းစိတ်ကိုလည်း မပြတ်ဖြည့်ဆည်းပါ။ စာများများဖတ်ပါ၊ များများသင်ယူပါ။ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေး၊ ဖက်ရှင်၊ မိသားစု….. ဘုရားသခင်က သင့်ကို လှပတဲ့မျက်နှာမပေးခဲ့ရင် အသိဉာဏ်ပြည့်တဲ့ စိတ်နှလုံးတစ်စုံရှိဖို့ကို သင်ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူပါ။ ပန်းအိုးတွေက ကွဲလွယ်တယ်၊ ရုပ်ရည်က အိုလွယ်တယ်။ အသိဉာဏ်က နှစ်လကြာလေ တိုးပွားလေ၊ ခိုင်မြဲလေဖြစ်တယ်။
၃။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းရတဲ့ အံ့သြဝမ်းသာခြင်းမျိုးကို သင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလကားစားရတဲ့ ညစာဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ မမေ့ပါနဲ့။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကပေးတဲ့ အဖိုးတန်ဈေးကြီးလွန်းတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုဂုဏ်ပုဒ်မျိုးနဲ့ သင်လက်ခံယူမလဲ! ဇနီးမယား? ချစ်သူရည်းစား? တကယ်လို့ ဇနီးမယားလည်းမဟုတ်၊ ချစ်သူရည်းစားလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုခဲ့ရင် ဒီလက်ဆောင်အတွက် ဘယ်လိုပေးဆပ်ခြင်းမျိုးကို သင်ပေးဆပ်ရလိမ့်မလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာကို ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ယောက်ျားတွေပေးမယ့် လက်ဆောင်ကိုပဲ မျှော်ကိုးမနေပါနဲ့။
၄။ ရိုးသားလို့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရိုးစင်းနုံအလို့ မရဘူး။ ရိုးရှင်းလို့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အလွယ်လိုက်လို့မရဘူး။ အိမ်အလုပ်၊ အိမ်ပစ္စည်းတွေကို သင်နားမလည်လို့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အညွန်းစာအုပ်ကို သင်ဖတ်နိုင်ရမယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ကူညီခဲ့သူတွေအတွက် ကျေးဇူးတရားကို ရင်ထဲအမြဲထည့်ထားပါ။ ကိုယ့်အပေါ် ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်သူတွေအတွက် ပုံမန်၊ သာမန်စိတ်ကိုမွေးပါ။
၅။ ငွေကြေးတွေကို အမြော်အမြင်ရှိရှိ သုံးပါ။ ကိုယ့်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အတွင်းခံ၊ ဖိနပ်တွေဝယ်ဖို့ မနှမြောပါနဲ့။ အပြင်ပန်းလှပအောင် ဝတ်ဆင်တယ်ဆိုတာ သူတစ်ပါးကြည့်ဖို့အတွက်ပါ။ ဒါဟာ ဝင့်ဝါခြင်းကို ဝတ်ဆင်တာဖြစ်တယ်။ သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ အတွင်းဝတ်တွေက ကိုယ်တိုင်အတွက်ပါ။ ဒါဟာ သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းကို ဝတ်ဆင်တာဖြစ်တယ်။
၆။ လိုက်လျောညီထွေတဲ့စကားကို ပြောဆိုတတ်ရမယ်။ ကလေးကလားနိုင်တဲ့၊ ကပ်ချွဲနှပ်ချွဲစကားတွေက သင့်မှာရှိသင့်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ သင့်မှာ ဗဟုသုတမရှိလို့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဆင့်အတန်းမရှိလို့ မရဘူး။ အမြင်မတူ၊ အသွင်ကွဲလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေးစားရိုသေမှုတော့ ရှိရတယ်။ ဖြစ်ခဲ့၊ ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ နာနာကျင်ကျင် မရွတ်ဆိုပါနဲ့။ ဒေါသထွက်နေတုန်း စကားတစ်ခွန်းပြောဖို့ ၁ကနေ ၂ဝအထိ ရေတွက်ပြီးမှ ပြောပါ။
၇။ သင်ဟာ တကိုယ်တည်းသမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါတွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာက တစ်ပါးသူကို မှီတွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ် မရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ အရာရာတိုင်း သူတစ်ပါးကို အားကိုးနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ သိန်းသောင်းချီတဲ့ လခရနေတာက အကောင်းဆုံးပေါ့။ ထောင်ဂဏန်းလခဆိုလည်း မဆိုးပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်သန်အောင် ရပ်တည်နိုင်တဲ့အစွမ်း သင့်မှာရှိသေးတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်။
၈။ ဘဝကပေးတဲ့ အရာတိုင်းကို တန်းဖိုးထားမြတ်နိုးပါ၊ သင်ယူပါ။ အချစ်ခံရ၊ အနှစ်သက်ခံရတယ်ဆိုတာ ပျော်ရွှင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ သူတစ်ပါးကိုချစ်တယ်၊ နှစ်သက်တယ်ဆိုတာ ပျော်ရွှင်တဲ့ပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကို သူခွဲသွားမယ်ဆိုရင် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ တောင်းဆုတွေပေးပါ။ အထီးကျန်တာကို ဂုဏ်ရှိရှိခံယူတာက နာနာကျင်ကျင်ချစ်နေရတာထက်စာရင် ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါ။ သူ့တစ်ပါးကို ခွင့်လွှတ်နားလည်တတ်ပါစေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်တဲ့စိတ်၊ ခွင့်လွှတ်နားလည်တဲ့စိတ်၊ တာဝန်သိတတ်စိတ် .. စတဲ့စိတ်တွေ တစ်ခုမှ သင့်မှာ လျော့နေလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ထားပါ။
အောငျမွငျပြျောရှငျတဲ့ မိနျးမသားတဈယောကျဖွဈဖို့ ဘာတှလေိုအပျပါသလဲ။ မိနျးမသားတို့အတှကျ မှတျသားဖှယျ ဘဝဒဿနတှကေို Trend ပရိသတျကွီးအတှကျ ဝမြှေလိုကျပါတယျ။ ဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး။
၁။ အခဈြကို သငျယုံကွညျလို့ရတယျ။ ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ ခြိုခြိုသာသာစကားတှကေို သငျနားထောငျလို့ရတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈဖကျနားက နားထောငျရငျ ကနျြတဈဖကျနားက ထှကျသှားပါစေ။ ပြားရညျလိုခြိုတဲ့ အဆိပျတှကေို ရငျထဲ သိမျးဆညျးမထားပါနဲ့။ တျောထကျတဲ့ယောင်ျကြားတှကေို သငျတနျဖိုးထားနိုငျတယျ။ တကယျလို့ အိမျထောငျသညျဆိုတဲ့ တံဆိပျကပျထားသူဆိုရငျ သငျတတျနိုငျ၊ လကျခံနိုငျတဲ့သူမဟုတျကွောငျး မမပေ့ါနဲ့။ ဒီလိုလူမြိုးနဲ့ကွုံခဲ့ရငျ ဘာအတှယျအတာမှမခနျြဘဲ ဝေးဝေးခှာပါ။
၂။ ကိုယျ့ရဲ့အပွငျပနျးအလှကို တနျဖိုးထားပါ။ ထိုနညျးတူ အတှငျးစိတျကိုလညျး မပွတျဖွညျ့ဆညျးပါ။ စာမြားမြားဖတျပါ၊ မြားမြားသငျယူပါ။ လူမှုရေး၊ ယဉျကြေးမှု၊ နိုငျငံရေး၊ ဖကျရှငျ၊ မိသားစု….. ဘုရားသခငျက သငျ့ကို လှပတဲ့မကျြနှာမပေးခဲ့ရငျ အသိဉာဏျပွညျ့တဲ့ စိတျနှလုံးတဈစုံရှိဖို့ကို သငျကိုယျတိုငျ တာဝနျယူပါ။ ပနျးအိုးတှကေ ကှဲလှယျတယျ၊ ရုပျရညျက အိုလှယျတယျ။ အသိဉာဏျက နှဈလကွာလေ တိုးပှားလေ၊ ခိုငျမွဲလဖွေဈတယျ။
၃။ လကျဆောငျပစ်စညျးရတဲ့ အံ့သွဝမျးသာခွငျးမြိုးကို သငျခံစားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အလကားစားရတဲ့ ညစာဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ မမပေ့ါနဲ့။ ယောကျြားတဈယောကျကပေးတဲ့ အဖိုးတနျဈေးကွီးလှနျးတဲ့ လကျဆောငျပစ်စညျးကို ဘယျလိုဂုဏျပုဒျမြိုးနဲ့ သငျလကျခံယူမလဲ! ဇနီးမယား? ခဈြသူရညျးစား? တကယျလို့ ဇနီးမယားလညျးမဟုတျ၊ ခဈြသူရညျးစားလညျး မဟုတျဘူးဆိုခဲ့ရငျ ဒီလကျဆောငျအတှကျ ဘယျလိုပေးဆပျခွငျးမြိုးကို သငျပေးဆပျရလိမျ့မလဲဆိုတာကို သသေခြောခြာ စဉျးစားပါ။ ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့အရာကို ကိုယျတိုငျဝယျယူနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ။ ယောကျြားတှပေေးမယျ့ လကျဆောငျကိုပဲ မြှျောကိုးမနပေါနဲ့။
၄။ ရိုးသားလို့ရတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ရိုးစငျးနုံအလို့ မရဘူး။ ရိုးရှငျးလို့ရတယျ၊ ဒါပမေဲ့ အလှယျလိုကျလို့မရဘူး။ အိမျအလုပျ၊ အိမျပစ်စညျးတှကေို သငျနားမလညျလို့ရတယျ၊ ဒါပမေဲ့ အနညျးဆုံးတော့ အိမျသုံးလြှပျစဈပစ်စညျးတှရေဲ့ အညှနျးစာအုပျကို သငျဖတျနိုငျရမယျ။ ကိုယျ့အပျေါ ကူညီခဲ့သူတှအေတှကျ ကြေးဇူးတရားကို ရငျထဲအမွဲထညျ့ထားပါ။ ကိုယျ့အပျေါ ကဲ့ရဲ့လှောငျပွောငျသူတှအေတှကျ ပုံမနျ၊ သာမနျစိတျကိုမှေးပါ။
၅။ ငှကွေေးတှကေို အမွျောအမွငျရှိရှိ သုံးပါ။ ကိုယျ့အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့အတှငျးခံ၊ ဖိနပျတှဝေယျဖို့ မနှမွောပါနဲ့။ အပွငျပနျးလှပအောငျ ဝတျဆငျတယျဆိုတာ သူတဈပါးကွညျ့ဖို့အတှကျပါ။ ဒါဟာ ဝငျ့ဝါခွငျးကို ဝတျဆငျတာဖွဈတယျ။ သငျ့တျောကောငျးမှနျတဲ့ အတှငျးဝတျတှကေ ကိုယျတိုငျအတှကျပါ။ ဒါဟာ သကျတောငျ့သကျသာရှိခွငျးကို ဝတျဆငျတာဖွဈတယျ။
၆။ လိုကျလြောညီထှတေဲ့စကားကို ပွောဆိုတတျရမယျ။ ကလေးကလားနိုငျတဲ့၊ ကပျခြှဲနှပျခြှဲစကားတှကေ သငျ့မှာရှိသငျ့တဲ့ အမှတျတံဆိပျတှေ မဟုတျဘူး။ သငျ့မှာ ဗဟုသုတမရှိလို့ရတယျ၊ ဒါပမေဲ့ အဆငျ့အတနျးမရှိလို့ မရဘူး။ အမွငျမတူ၊ အသှငျကှဲလို့ရတယျ။ ဒါပမေဲ့ လေးစားရိုသမှေုတော့ ရှိရတယျ။ ဖွဈခဲ့၊ ပကျြခဲ့တဲ့အကွောငျးကိုပဲ ထပျတလဲလဲ နာနာကငျြကငျြ မရှတျဆိုပါနဲ့။ ဒေါသထှကျနတေုနျး စကားတဈခှနျးပွောဖို့ ၁ကနေ ၂ဝအထိ ရတှေကျပွီးမှ ပွောပါ။
၇။ သငျဟာ တကိုယျတညျးသမားပဲဖွဈဖွဈ၊ အိမျထောငျသညျပဲဖွဈဖွဈ ဒါတှကေ အရေးမကွီးပါဘူး။ အရေးကွီးတာက တဈပါးသူကို မှီတှယျမယျဆိုတဲ့စိတျ မရှိဖို့ပဲလိုတယျ။ အရာရာတိုငျး သူတဈပါးကို အားကိုးနလေို့မဖွဈပါဘူး။ သိနျးသောငျးခြီတဲ့ လခရနတောက အကောငျးဆုံးပေါ့။ ထောငျဂဏနျးလခဆိုလညျး မဆိုးပါဘူး။ အနညျးဆုံးတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုရှငျသနျအောငျ ရပျတညျနိုငျတဲ့အစှမျး သငျ့မှာရှိသေးတယျ။ ဒါဟာ သငျ့ရဲ့ဂုဏျယူစရာဖွဈတယျ။
၈။ ဘဝကပေးတဲ့ အရာတိုငျးကို တနျးဖိုးထားမွတျနိုးပါ၊ သငျယူပါ။ အခဈြခံရ၊ အနှဈသကျခံရတယျဆိုတာ ပြျောရှငျတဲ့ဥစ်စာပစ်စညျးဖွဈတယျ။ သူတဈပါးကိုခဈြတယျ၊ နှဈသကျတယျဆိုတာ ပြျောရှငျတဲ့ပေးဆပျခွငျးဖွဈတယျ။ တကယျလို့ သငျ့ကို သူခှဲသှားမယျဆိုရငျ ပွုံးပွုံးရှငျရှငျနဲ့ တောငျးဆုတှပေေးပါ။ အထီးကနျြတာကို ဂုဏျရှိရှိခံယူတာက နာနာကငျြကငျြခဈြနရေတာထကျစာရငျ ကောငျးပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ကောငျးကောငျးဆကျဆံပါ။ သူ့တဈပါးကို ခှငျ့လှတျနားလညျတတျပါစေ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျတဲ့စိတျ၊ ခှငျ့လှတျနားလညျတဲ့စိတျ၊ တာဝနျသိတတျစိတျ .. စတဲ့စိတျတှေ တဈခုမှ သငျ့မှာ လြော့နလေို့ မဖွဈဘူးဆိုတာကို နားလညျထားပါ။